August 22, 2014 – democracy for burma
#Tin #DaungNi #die at #University #Hospitals in the #MICU. In #Cleveland #Ohio ,Friday 22th of 2014.
On August 22, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Tin DaungNi die at the time of 4:25 AM. At the University Hospitals in the MICU. In Cleveland Ohio 44106. On Friday 22th of 2014. Eastern Time
သူငယ်ချင်း ရဲဘော်ဒေါင်းနီအတွက် အမှတ်တရပါ…
#Want #Know #Gen #Prayuth Chan-ocha, #Thailand’s #29th #primeminister
On August 22, 2014 August 22, 2014 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
For people with casual acquaintance with Gen Prayuth Chan-ocha, Thailand’s 29th prime minister, he seems to beastern person.
But friends close to him said in fact Gen Prayuth is not so. He isakind and gentle person.
Though at the outset the general’s character seems to be tough, stern and outspoken.
However those close to him have stated that he is in factakind person who is gentle, diligent and an avid reader.
He loves keeping up with the latest news, loves movies, reads papers, magazines and even pocket books.
Most importantly he is known to beaquick thinker, isaman of action and caring.
He is concerned for everyone around him.
Gen Prayuth was married to Assistant Prof. Naraporn Chan-ocha.
Gen. Prayuth Chan-ocha studied at the Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS) Class 12, Command and General Staff College (CGSC) Class 63, and National Defense College of Thailand (NDC) 5020. Later, he attended the Infantry Officer Basic Course Class 51 and Infantry Officer Advanced Course Class 38.
He achievedaBachelor of Science in Chula Chomklao Royal Military Academy. After graduating from the academy, Gen. Prayuth served in the 21st Infantry Regiment (Queen’s Guards).
In 2002, he served asaDeputy Commanding General in the 2nd Infantry Division of the Royal Thai Army, ascending to the rank of Commanding General one year later. In 2005, he becameaDeputy Commanding General for the 1st Army Area of which the 2nd Infantry Division isapart, and again became its Commanding General withinayear.
Gen. Prayuth was the Chief of Staff for the Royal Thai Army from 2008 to 2009. In 2009, was appointed honorary adjutant of the king. In 2010, he succeeded Anupong Paochinda as Commander in Chief of the army. Continue reading “#Want #Know #Gen #Prayuth Chan-ocha, #Thailand’s #29th #primeminister” →
#MYANMAR #BURMA #investigating #sales of #shares in #Asia #Green #Development (AGD)
On August 22, 2014 August 22, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
22.8.2014 The financial investigation unit of the National Police Force is investigating sales of shares in Asia Green Development (AGD) to Aye Ne Win for possible connections to money laundering, Colonel Kyaw Win Thein, deputy commander of the unit said on August 21.
Five other cases are being investigated for possible laundering of drug-trade money through real estate transactions, he toldameeting on the new Anti-Money Laundering Law held at the office of the Myanmar Banks Association.
The investigations have yet to advance to the stage of interrogations, he said. “We are investigating and we have not finished that stage yet. We can’t make what we know public at this time, but we have submitted reports to officials,” he told the bankers.
Kyaw Win Thein said the investigation into Aye Ne Win’s share purchase began before reports appeared about the shocking transactions in journals and newspapers. Police cannot say more publicly due to their code of conduct which mandates respect for privacy and the rights of those under investigation, the colonel said.
The five cases of alleged laundering of funds earned from the narcotic trade through real- estate transactions could be the tip of the iceberg, analysts have said, point to the swift fluctuations in prices of real estate in the country over the past few years asapossible option for laundering money earned from criminal activity.
In Myanmar, people commonly refer to “black” and “white” money to distinguish between funds gained from criminal activities and those gained from legitimate business.
Under the new law to combat money laundering, authorities are closely monitoring those whose monthly savings income exceeds Ks 100 million (about US$100,000). Police estimate that there are about 1,000 people above that threshold, but stress that they have no evidence that these funds are being laundered through banks, Kyaw Win Thein said.
Although the Anti-Money Laundering Law was enacted early this year – it replaced the 2002 Control of Money Laundering Law – the by-laws of the new law have yet to be enacted.
Kyaw Win Thein said it was not necessary to wait for the by-law to begin investigations and take action against suspects.
Aye Ne Win said in July that he had bought 15 per cent of AGD’s shares and had entered into an agreement to purchase another 60 per cent, withafurther plan to raise his stake in the bank to 85 per cent within six months. The comments were made in an interview in the July 20 issues of The Messenger,aweekly journal.
Aye Ne Win is the grandson of former dictator General Ne Win, raising questions about where Aye Ne Win obtained money for his share purchase.
The Central Bank of Myanmar scrutinises share purchases and it will take at least one andahalf months for the process to be complete, Aye Ne Win said, adding that the 85 per cent target wasaplan.
AGD is owned by crony Tay Za. He said he will reconsider the share sale, but Aye Ne Win said the agreement had already been made. CR. ELEVEN MEDIA
#MYANMAR #BURMA #အာရှနီဝန်း ဆရာတော်ရှင်ဥတ္တမ မြောက်ဦးမြို့တွင် ထွန်းလင်းပြီ #SAYADAW #U #OTTAMA #STATUE
အာရှနီဝန်း ဆရာတော်ရှင်ဥတ္တမ မြောက်ဦးမြို့တွင် ထွန်းလင်းပြီ………………………..
၂၂.၈.၂၀၁၄ နိသည် မြောက်ဦးမြို့အတွက် သမိုင်းတွင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် ရခိုင့်မီးရှူးတန်းဆောင် ဆရာတော်ရှင်ဥတ္တမ၏ ကြေးရုပ်ထုတော်ကို ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အနော်မာ ပန်းခြံရှိ အုပ်ခုံပေါ်တွင် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ရခိုင့်အမျိုးသားတို့၏ ခေါင်းဆောင် ဆရာတော်ရှင်ဥတ္တမကြေးရုပ်ထုစိုက်ထူနိုင်ရန်အတွက် မြောက်ဦးမြို့သူ မြို့သားတို့စုပေါင်းအလှူဝင်ငွေများနှင့် ၆ လကြာပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကို စက်တင်ဘာ ကိုးရက်နိ ဆရာတော် ရှင်ဥတ္တမနိတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ CR. Aung Soe Myint
#MYANMAR #BURMA” #သီတဂူဆရာတော် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် (အမေရိကန်ကော်မရှင်အဖွဲ့) အား ပြောင်မြောက် ပြတ်သားသောစကားမိန့် “
” သီတဂူဆရာတော် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် (အမေရိကန်ကော်မရှင်အဖွဲ့) အား ပြောင်မြောက် ပြတ်သားသောစကားမိန့် ”
( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကြောက်လန့်ခြင်း ကင်းဝေးရေးအတွက် ဆုိုသည့် မိန့်ခွန်း)
၂၁-၈-၂၀၁၄ နံက်(၀၉း၀၀)နာရီတွင် သီတဂူဆရာတော်ဦးဆောင်သော သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်ရှိဆရာများနှင့် အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့တုို့ စစ်ကုိုင်းတောင်ရုိုး၊ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်ရှိ ပဋလိပုတ်ကျောင်းဆောင် အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထုိုအခမ်းအနားတွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ဘာသာရေးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကြောက်လန့်ခြင်း ကင်းဝေးရေးအတွက် ဆုိုသည့် မိန့်ခွန်းကုို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထုို့နောက် အစည်းအဝေးကုို ၁၁း၀၀ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထုိုမိန့်ခွန်းကုို မြန်မာဘာသာ (မူရင်း) အတုိုင်း တင်ပေးလုိုက်ပါသည်။ English လိုမူရင်း ဖတ်လိုသူ၊ Share လုပ်လိုသူများအနေဖြင့် Religion for Peace and Freedom from Fear (NOTE) တွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။
(Religion for Peace and Freedom from Fear)
သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်က ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
တွေ့ဆုံခွင့်၊ စကားပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတို့ကိုးကွယ်ရာ အဓိကကျသောဘာသာကြီး(၆)ခု ရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးလူသားတွေ မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့ အချိန်ကစပြီး လူသားတို့သည် ကြောက်စိတ်ကို အခြေခံ၍ နေကိုကိုးကွယ်ခြင်း၊ လကိုကိုးကွယ်ခြင်း၊ နတ်အမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ခြင်းတို့ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကို Primitive Religion လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ Religionတွေကို ကြောက်စိတ်က စတယ်လို့ ပညာရှိအများစုတို့က ဆိုကြပါတယ်။ အကြောက်တရားတွေမှ သက်သာရာရစေဖို့ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆတွေ စတင်ခဲ့ကြတာလို့ ဗုဒ္ဓကလည်း အတိအလင်း ပြောထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာသာတရားတိုင်းဟာ လူသားတွေရဲ့ရင်ထဲက အကြောက်တရားတွေကို သက်သာရာ ရစေဖို့နဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် အကြောက်တရားတွေကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဘာသာတရားတိုင်းနှင့် အတူလက်တွဲနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘာသာတရားတချို့နဲ့ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ဘာသာဝင်တချို့ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ အလွန်ပဲ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ Primitive Religionတွေရဲ့ နောက်မှာတော့ ဟိန္ဒူဘာသာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နယ်မြေမှာ ဂျိန်းဘာသာရယ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်။ ဂျိန်းဘာသာ ပေါ်ပေါက်လာပြီးသည့်နောက် အနှစ်လေးဆယ်လောက်အကြာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် ဂျိန်းဘာသာဝင်တို့ရဲ့ နယ်မြေမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဂျိန်းဘာသာဝင်တွေနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျိန်း၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမိုင်းမှာ အချင်းချင်းသွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရယ်လို့ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့က ဗုဒ္ဓဟာ ဗိဿနိုးဝင်စားတဲ့သူလို့ ဆိုတာတောင်မှ ပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ခြင်း ပဋ္ဋိပက္ခမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဟောပြောရေးသား တုန့်ပြန်ချေပတာလောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ၏နောက် အနှစ်ခြောက်ရာကျော်ကြာတော့ Jesus Christ ပေါ်ပေါက်လာပါခဲ့တယ်။ Jesus Christ ဟောပြတဲ့ ပညတ်တော်(၁၀)ပါးမှာ ဗုဒ္ဓဟောပြသောသီလတရား ဗြဟ္မစရိယတရားတွေနှင့် ထပ်တူညီမျှတဲ့ အချက်တွေ များစွာတွေ့ရပါတယ်။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတို့ အရှေ့အာရှဘက်ကို ၀င်ရောက်လာကြတော့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ နိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့ အိန္ဒိယ၊ သီဟိုဠ်၊ ဗမာ၊ ထိုင်း၊ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ၀င်ရောက်ပြီး ခရစ်ယာန်သာသနာကို ဖြန့်ချီခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေနှင့် သူတို့ရောက်ရာ တိုင်းပြည်အသီးသီးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေဟာ အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပေါင်းသင်း၍ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပဋိပက္ခရယ်လို့ မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဂျိန်းဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရား အသီးသီးမှာ ဟောထားတဲ့ သီလ(morality)၊ မေတ္တာ (loving-kindness)၊ ကရုဏာ(compassion)ဆိုတဲ့ common-platformပေါ်မှာ အတူတကွ လက်တွဲ လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကို အခြေခံသောဘာသာရေးမှာ ပဋိပက္ခကင်းပြီးတော့ ကျန်းမာရေး ပညာရေး အစရှိတဲ့ လူမှုရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုသာ ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ကြတာတွေ အတိတ်မှာရော ပစ္စုပ္ပန်မှာပါ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အတင်းအကြပ်နှိပ်စက်လို့ ၀င်လာကြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ကြတာလည်း ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အများအပြားပဲ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကခြိမ်းခြောက်လို့ ၀င်ရောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဆန္ဒနဲ့ သူတို့ ၀င်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ဘာသာမဆိုလွတ်လပ်စွာ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့် freedom of worship, freedom of belief ဆိုတာရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာကောင်းသော ဘာသာတရားတစ်ခု ရှိနေ
Aggressiveness and extremism ၀ါဒဟာ ဘာသာရေးမှာရော နိုင်ငံရေးမှာပါ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အစလို့ အားလုံးသတိပြုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အီရတ်မှာ အစ္စလာမ်းမစ် အစွန်းရောက်တွေက ရှေးဟောင်း Zoroastrianism ဘာသာဝင်တွေကို သေနတ်နှင့်ချိန်ပြီးတော့ သူတို့ဘာသာထဲ အတင်းအကျပ် ၀င်ခိုင်းနေပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ မပြောင်းရင် သတ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ အာဖရိကမှာတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ၀င်ခဲ့ရောက်လို့ သေဒဏ်ပေးခံရတဲ့ သတင်းကိုလည်း ကြားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒို့အရှေ့အာရှကအင်အားချိနဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံလေးတွေဟာ ယနေ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဓါးအောက် ကျရောက်ရမှာကို ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ် နေကြပါတယ်။ အနှစ်လေးဆယ်ကြာ ခရူးဆိတ် ဘာသာရေး စစ်ပွဲကြီးကို ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုပါ။
မွတ်စလင်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြား တိုက်ခိုက်နေ
အေဒီ-(၁၃ရာစု)နှစ်လောက်က တူရကီမှအိန္ဒိယပြည်ကြီးကို ဖြတ်သန်းချီတက်လာတဲ့ မွတ်စလင်စစ်တပ်ကြီးဟာ ပါလခေါ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး၍ အတင်း အကျပ် အစ္စလာမ်းမစ်နိုင်ငံအဖြစ် ပြောင်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းဆက်ပေါင်း ၁၂-ဆက် မျှအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ပါလဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံပါပဲ။ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ကြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မွတ်စလင် Muslim State ထူထောင်လိုက်ပါပြီ။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဒီကနေ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက် နေကြပါပြီ။ မူစလင် နိုင်ငံထူထောင်ရေးပါပဲ။ ဘာသာရေးကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း၊ လူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ရေး၊ စိတ်ထားဖြူစင်ရေးနဲ့ လူမှုရေး ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေအတွက်သာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီကနေ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လောကမှာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ အစ္စလာမ်းမစ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ လုပ်နေကြတာဟာ အလွန်ပဲစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိင်ငံဟာ ၁၉၄၈-ခုနှစ်က အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်က ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကို အနှစ်တစ်ရာနီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအင်္ဂလိပ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကားလမ်း ရထားလမ်းဖောက်ခြင်းစတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် အလုပ်သမားတွေကိုအိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေပြီး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဥပဒေကင်းမဲ့စွာနဲ့ မြောက်များစွာ တင်သွင်းခဲ့တယ်။ အမေရိကန်တွေ United Statesကို ထူထောင်ခဲ့စဉ်တုန်းက အာဖရိကကလူမည်းတွေကို ကျေးကျွန်အဖြစ် ခေါ်သွင်းခဲ့ကြသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ်ဆိုးကျိုးကို များစွာဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာ ဗမာ့တပ်မတော်ရယ်လို့ ဗမာတွေကို စစ်တပ်ဖွဲ့၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အံ့သြစရာ ကောင်းတာက ကရင်တပ်မတော် ကချင်တပ်မတော် ချင်းတပ်မတော် ကယားတပ်မတော်တွေရယ်လို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီး ဒို့ဗမာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရအင်္ဂလန်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ သူတို့ဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ ကရင်တပ်တွေ ကချင်တပ်တွေ ကယားတပ်တွေ အားလုံးသူပုန်ထပြီး ဗမာအစိုးရကို တော်လှန်ကြတော့တာပါပဲ။ အဲဒီပြဿနာတွေကို ဒီကနေ့တိုင် ဒို့နိုင်ငံမှာဖြေရှင်းလို့ မရသေးပါဘူး။ အဲဒါဟာလွတ်မြောက်ပြီးစ ဒို့လို ကိုလိုနီနိုင်ငံလေးများရဲ့ ခံစားရစမြဲဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခတွေပါပဲ။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခွင်မှာ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်ရာနီးပါးမျှကာလပတ်လုံး ဥပေဒမဲ့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ (၁၉၄၈-၄၉) ခုနှစ်များမှာ မူဂျာဟစ်အမည်နဲ့ သူပုန်ထပြီးတော့ ပြည်နယ်တောင်းခဲ့ကြတယ်။ Musulim State ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအစ္စလာမ်းမစ် မူဂျာဟစ်သူပုန်တွေကို ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ အကြိတ်အနယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂါလီလို့လည်းမပြောဘူး။ မူဂျာဟစ်လို့လည်း မပြောဘူး။ ရိုဟင်ဂျာလို့ ကြေညာပြီးတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် သူတို့အိမ်တွေကို မီးရှို့ပြီးတော့ သူပုန်ထဖို့၊ သီးခြားနယ်မြေတောင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးနဲ့ မီဒီယာများကို ကြီးစိုးလာတဲ့ အစ္စလာမ်
ဒို့တတွေက ကမ္ဘာမှာဒုတိယအင်အားအကြီးမားဆုံး ငွေကြေးအကြွယ်ဝဆုံး ဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ကမ္ဘာကို မပြိုင်နိုင်ကြဘူး၊ မယှဉ်နိုင်ကြဘူး။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တွေထဲမှာတောင် အစ္စလာမ်းမစ်နိုင်ငံတွေက ဒုတိယနေရာအများဆုံးမှာ ရောက်နေကြပြီ။ မီဒီယာလောကမှာလည်း Money Powerနဲ့ မီဒီယာတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးလို့နေပါပြီ။ Money Powerအားကောင်းတဲ့ အစ္စလာမ်တွေက ကမ္ဘာမှာ ရေဒီယို တယ်လီဗေးရှင်းနဲ့ ဂျာနယ် တော်တော် များများကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို သြဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ မီဒီယာလောကကို ဒို့ဆင်းရဲတဲ့ဗမာနိုင်ငံလေးဟာ ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ ဗမာကပြောသမျှ ကမ္ဘာကမယုံဘူး။ အစ္စလာမ်ကပြောလိုက်ရင် တစ်ကမ္ဘာလုံး တအုန်းအုန်းဖြစ်နေကြတယ်။ ဒို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းဟာ ကမ္ဘာမှာ မကောင်းဘဲဖြစ်နေတာဟာ အစ္စလာမ်မီဒီယာတွေရဲ့ သြဇာအာဏာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒို့ကတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့အတိုင်း favour နှင့် fear အစွန်းနှစ်ဘက်က လွတ်အောင်ရှောင်ပြီး ဒို့တိုင်းပြည်နဲ့ဒို့လူမျိုးကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စောင့်ရှောက်ကာကွယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလို ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ပြောကြားလိုတာကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘ၀နဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာနီးပါးနေခဲ့ကြရတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါမှာလည်း နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်နီးပါး ပြည်တွင်းမှာ လူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ ဤအခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမည်ဟု ပြည်ပအဖွဲ့အစည်း အကူအညီတွေလာကြသော်လည်း ပြဿနာတွေ ပြေလည်မသွားဘဲ ပိုမိုခက်ခဲအောင် လုပ်သွားခဲ့ကြတာတွေ ရံခါမှာတွေ့ရပါတယ်။
သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ် ဒီနေ့ပြောကြားလိုသည်မှာ ထိုအခက်အခဲပြဿနာများကို ခင်ဗျားတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်က ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြပါလို့ ကျွန်ုပ် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက – လူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အစိုးရက စားပွဲဝိုင်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေး အစွန်း ရောက်နှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တချို့က ဘာသာရေးပဋိပက္ခများဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ဖန်တီး နေကြတာကိုလည်း တွေ့နေကြရပါတယ်။ ဤပဋိပက္ခများကို ငြိမ်းချမ်းသွားအောင် ၀ိုင်းဝန်း ဖြေရှင်းပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းအောင် ဖြေရှင်းပေးရာမှာ နည်းစနစ်ဟာ အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြေရှင်းရင်း ဖြေရှင်းရင်းဖြင့် ပို၍ပို၍ ရှုတ်ထွေးမသွားအောင် သတိပြုကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပီပီ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ သူတပါးအကျိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားစွန့်လွတ်ခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ခန္တီ မေတ္တာ သတိ ပညာ ကြီးကြီးထား၍ ဤဘာသာရေး ပြဿနာများကို အကြမ်းဖက်ခြင်း လုံးဝကင်းလျှက် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ ( Ph.D,D.Litt )
#MYANMAR #BURMA #Sitagu #International #Buddhist #Academy- #US #International #Religious #Freedom
On August 22, 2014 August 25, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Religion for Peace and Freedom from Fear
Delievered by Sitagu Sayadaw
at Seminor Sitagu International Buddhist Academy and US commission on International Religious Freedom
Good morning Honorable gentlemen
Welcome to Sitagu International Buddhist Academy. I am glad to meet and to discuss with you.
There are six major Religions in the world today. Since Human beings came on Earth, people worshipped the Sun, the Moon and various deities. They also sought refuge in them on the basis of fear. It was calledaprimitive religion. Most of scholars stated that horror initiated the religions of those days. The Buddha also clearly said that the idea and concept of religions originated from fear. Therefore every religion has full responsibility for the removal of fear which is sticking on the mind of people. But, on the contrary, it is regrettable thatafearful religion and its followers emerged in the world.
After the primitive religions there appeared Hinduism. And afterwards, Jainism also came out on the Land where Hinduism was being flourished. Forty years after the emergence of Jainism, there appeared Buddhism also. Buddhism appeared on the birth place of Hinduism and Jainism and peacefully coexisted with them for ages. There was no traceable history of bloodshed and conflict among them. Also there was no violence and quarrel even on the statement issued by the Hindus saying that the Buddha was an incarnation of God Vishnu. We had only oral and written arguments.
Six hundred years after the Buddha, Jesus Christ appeared in the World. In the ten commandments of Christianity we find many similarities with Buddhism in the field of Morality and Noble practice. Christian missions tried to flourish their faith when they came to the East Asian countries such as India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Korea and Japan. The people of those countries were non-Christians. But, even after the arrival of Christianity also there was peaceful coexistence between Christians and non-Christians. No history of conflict can be traced to any side. Because all the Hindus, Janis and Christians are walking together on the common platform of their respective teachings, that is Morality, Loving-kindness and compassion. The religion, founded based on Loving-kindness and compassion, has no conflict and it does only social welfare services like Health, Education and other social infrastructures.
In Myanmar, many Christians converted to Buddhism in the past as well as at the present. They did it not because they were forced by the Buddhists. Similarly, many of Buddhists also converted to Christian faith. No single Christian threatened them to do so. They did it of their own free will. Every religion has and should have freedom of worship and freedom of belief. Look at the Crusade that prolonged about forty years. It was recorded in the history of the world.
We have to note that the beginning of conflict is aggressiveness and extremism either in the field of religion or that of politics. Today, in Iraq, the Islamic extremists are forcing ancient Zoroastrians to change their faith into Islam. They even threatened them to kill if their demand is not met. In Africa,aMuslim woman was given the death sentence just because she has converted to Christianity. Therefore, we, the East Asian Buddhist countries are living in constant daily fear of falling under the sword of the Islamic extremists. As we are lacking power and influence, we cannot compete against with the rapid growth of Islamic world.
There wasarecorded history that in the thirteenth century A.D,aMuslim army marched from Turkey through India and destroyed Pala Buddhist dynasty and converted it into Islamic state. Pala Buddhist dynasty was none other than present Bangladesh. In the south of Philippine, the Islamic extremists revolted against the government for twenty years. Today, they establishedaMuslim state there. The Islamic extremists are holding weapons in the south of Thailand to make itaseparate Muslim state.
Every religion, according to me, should perform its activities only for the good and welfare of the people. But, today, Islamic extremists are trying to establish Islamic states by waging war against non-Muslims. It is regrettable that they are performing the holy war (Jihad) on the name of God.
Myanmar regained its independence from British in 1948. They colonized Myanmar for nearly hundred years. Many Africans were imported as slaves when the United States of America was established. In the same way, the English rulers illegally imported labourers from India and Bangladesh to Myanmar for the hard labour during their rule.
There is also another bad consequence caused by English colonial rule. During hundred years of British rule, Burmese nationals were not formed as an army. But it was ridiculous that the English rulers administered Myanmar forming different groups of indigenous minorities as an army. When the British rulers went back to England, the minority groups revolted against the Burmese government. We cannot solve those problems until today. These are the natural sufferings faced by the colonial countries. Continue reading “#MYANMAR #BURMA #Sitagu #International #Buddhist #Academy- #US #International #Religious #Freedom” →
#phenomenon #occurs @Khao Laem ya #National Park #RAYONG
On August 22, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
Khao Laem ya National Park @ RayongStrange .phenomenon occurs (every year) There arealot of colorful cups jellyfish .. Jetty area. Khao Laem ya National Park in the Gulf of Thailand//Department of marine and coastal resources. .., with this year’s performance, there are many colorful jellyfish Khao Laem ya. Especially in the morning and evening Time wave.Cr. Department of marine and coastal resources
#THAISOUTH #YALA #PATTANI #RIP #TERRORIST #ATTACK
On August 22, 2014 August 22, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
22.8.20142ATTACK TODAY
Pattani subdistrict headman killed in gun attack;
Soldier wounded in Yala bomb ambush as teacher protection unit patrols
One soldier was killed and give others were wounded when heavily armed Muslim insurgents ambushed their pickup truck on Highway 410 in Banang Satar district of Yala province today.
Three other soldiers suffered injuries after the hospital ambulance crashed with another vehicle while was rushing to Yala hospital.
Police saidagroup of nine soldiers were returning to their base in Banang Satar district after their routine patrol on Highway 410 when they were ambushed by unknown number of insurgents hiding by roadside bushes.
Six soldiers were injured, one DIED
Afterabrief exchange of fires, the insurgents fled the scene when nearby troops rushed in to help.
A hospital ambulance arrived and rushed all the six injured to Yala hospital with three other soldiers accompanying.
But the ambulance crashed with another vehicle on the way , causing injuries to three accompanying soldiers.
One soldier injured from the ambush died later in hospital. He was identified as Sgt NimitbTham-akat.
Troops are still hunting the fleeing insurgents into the jungles, police said.
#crime #22/8/57 #RIP ภาพที่ 1 #ยะลา – เมื่อเวลา 08.20 น. #ปัตตานี
เมื่อเวลา 19.22 น. – คนร้ายจำนวน 3-4 คน สวมเสื้อสีดำ ใช้รถ จยย.เป็นยานพาหนะ ใช้อาวุธปืน ยิงราษฏรชาย ชื่อนายสูกิฟลี แลเม๊า อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 บ.ทุ่งยามู ม.6 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นลูกจ้างร้านรับซื้อผลไม้ กระสุนถูกบริเวณ ศีรษะ ได้รับบาดเจ็บสาหัส นำส่ง รพ.ศูนย์ยะลา หลังก่อเหตุ คนร้ายได้หลบหนีไป รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณตลาดเกษตรแยกมลายูบางกอก ต.สะเตง อ.เมือง
พื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองยะลา โทร.073-212-634-6
พงส.ร.ต.ท.อิสวัส ยิ่งคง โทร.084-859-5688
พงส.ผนพ. พ.ต.ท.ศรีเทพ รัตนโท โทร.081-372-4042
งานสื่อสารและเฝ้าฟัง ศชต. โทร.073-203-690-1 CR. CATHAY MEE
เมื่อเวลา 20.25 น. – ป้อมบันนังดาลำ ม.1 ต.บันนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีคนร้ายยิงก่อก่วน เบื้องต้น จนท.กำลังตรวจสอบรถ คันก่อเหตุ และประสานจุดตรวจใกล้เคียง ทั้ง ทหาร และฝ่ายปกครอง ในการ ว.4 ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ!!
ศุกร์ 22/8/57 …(ภาระกิจหน้าที่ จนท.ทหารพราน ในฟื้นที่ จ.นราธิวาส)
ภาพที่ 1 – กองร้อยทหารพรานที่ 48 จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครประจำพื้นที่ ลาดตระเวน เส้นทางรถไฟด้วยการเดินเท้า เฝ้าตรวจ ในพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทำของกลุ่ม ผกร. เพื่อดูแลเส้นทางรถไฟพี่น้องประชาชนที่ใช้รถไฟในการเดินทาง
ภาพที่2– หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จัดกำลังเดินลาดตระเวนตามเส้นทางรถไฟ ริมแม่น้ำ เส้นทางหลัก และ หมู่บ้าน เพื่อเป็นดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในการดำเนินชีวิต
ภาพที่3– ร้อย.ทพ.4615 จัดกำลังลาดตระเวนเส้นทาง พื้นที่เป้าหมายจุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ภาพที่4– ร้อย.ทพ.4906 จัดชุดแพทย์เดินเท้า ออกแจกจ่ายยาและสอบถามสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการแพทย์เดินเท้า เพื่อบริการดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองได้ ณ บ.ไอร์กาแซ ม.6 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
Cr.NaRaPeace (นราสันติ)
ศุกร์ 22 ส.ค. 57
เมื่อเวลา 09:35น. โจรใต้ ไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิง นายซอมะ เจะดี ซึ่งเป็นกำนัน
ตำบลหนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บ นำส่ง รพ.ยะหริ่ง เหตุเกิดบนถนนสาย 42 บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พิกัด QH 631574 ขั้นต้นคนร้ายใช้รถ อีซูซุ สีดำ มีคนนั่งท้ายกะบะ2คน ขับหนีไปทางนราธิวาส รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เพิ่มเติม นายซอมะ เจะดี กำนัน ต.หนองแรต ..ได้เสียชีวิตแล้วที่ โรงพยาบาล ยะหริ่ง คนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้า
เมื่อเช้าเวลา 08.20 น.
สภ.บันนังสตา รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ชป.ทหาร ร้อย ร.1732 ฉก.15 ขณะออก ลว.รปภ.ครู เหตุเกิด บ้านย่อยบ้านทรายแก้ว ม.3 ต.ตะลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เบื้องต้นบาดเจ็บ 1 นาย ชื่อ พลฯเสรี แก้วหงส์ ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนและใบหน้า รู้สึกตัวดี นำส่ง รพ.บันนังสตา
22/8/57 – เก็บตกสถานการณ์ทางใต้ ช่วงเช้า มี2เหตุการณ์
ภาพที่ 1 – เมื่อเวลา 08.20 น. – ยะลา
สภ.บันนังสตา รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ชป.ทหาร ร้อย ร.1732 ฉก.15 ขณะออกลาดตะเวณ รปภ.ครู เหตุเกิด บ้านย่อยบ้านทรายแก้ว ม.3 ต.ตะลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เบื้องต้นทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ชื่อ พลฯเสรี แก้วหงส์ ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนและใบหน้า รู้สึกตัวดี นำส่ง รพ.บันนังสตา…ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
ภาพที่2– เมื่อเวลา 09.25 น. – ปัตตานี
คนร้ายได้ใช้รถ อีซูซูสีดำ มีคนนั่งท้ายกระบะ2คน ได้ใช้อาวุธปืนอ้าก้ายิง นายซอมะ เจะดี ซึ่งเป็นกำนัน ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บ ทหารพรานได้นำส่ง รพ.ยะหริ่ง เหตุเกิดบนถนนสาย 42 บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ….ล่าสุด กำนันซอมะ ได้เสียชีวิตแล้วที่ โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี R.I.P. CR. CATHAY MEE